Izindaba - Umhlahlandlela Ophelele Wokukala I-IP Engangeni Manzi - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7
Umhlahlandlela Ophelele Wokulinganiswa Kwe-IP Okungangeni Manzi - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7
Kungenzeka ukuthi uhlangabezane nemikhiqizo enophawu kuyo noma emaphaketheni ayo, njenge-IP44, IP54, IP55 noma eminye efanayo.Kodwa uyazi ukuthi lezi zisho ukuthini?Nokho, lena ikhodi yamazwe ngamazwe emele izinga lokuvikelwa komkhiqizo ekungeneni kwezinto eziqinile noketshezi.Kulesi sihloko sizochaza ukuthi i-IP isho ukuthini, ifundwa kanjani leyo khodi futhi sichaze ngemininingwane amazinga ahlukene okuvikela.
Isihloli Sezilinganiso ze-IP Uyafuna ukwazi ukuthi sisho ukuthini isilinganiso se-IP kumkhiqizo wakho?Sebenzisa lesi sihloli futhi sizobonisa izinga lokuvikela.
Umkhiqizo onesilinganiso se-IP00 awuvikelekile ezintweni eziqinile futhi awuvikelekile oketshezini.
Kusho ukuthini Isilinganiselwa se-IP? Isilinganiso Se-IP sisho Isilinganiselwa Sokuvikela Sokungena (Okwaziwa nangokuthi Ukumaka Kokuvikela Kwamazwe Ngamazwe) okumelela ikhodi umkhiqizi okufanele ayicacise ukuze iklayenti lazi ukuthi umkhiqizo uvikelekile yini ekungeneni kwezinhlayiya zesimo esiqinile noma izinhlayiya eziwuketshezi.Ukulinganisa izinombolo kusiza abantu ukuthi banakekele kangcono imikhiqizo abayithengayo futhi bazi ukuthi bayigcina kanjani ngaphansi kwezimo ezifanele.Abakhiqizi abaningi bezinto zikagesi bacacisa imininingwane eyinkimbinkimbi ehlobene nemikhiqizo yabo, kodwa Isilinganiselwa se-IP kungaba lula ukusiqonda uma abantu bazisiwe ngaso.Ikhodi ye-IP iyithuluzi elibonisa ngale elingasiza noma ubani ukuthi athenge imikhiqizo yekhwalithi engcono, ngaphandle kokudukiswa i-jargon kanye nokucaciswa okungacacile. I-Ingress Protection isilinganiso esijwayelekile esibonwa emhlabeni wonke ukuthi noma ubani angasisebenzisa, kungakhathaliseki ukuthi ukuyiphi indawo.Lawa mazinga we-electrotechnology adalelwe ukwazisa abantu ukuthi isikhwama somkhiqizo sinamakhono angakanani, ukusuka emanzini ukuya ekuvikelweni kwento eqinile.Ikhodi ibukeka kanje: inguqulo emfushane ye-Ingress Protection, eyi-IP, elandelwa amadijithi amabili noma uhlamvu X. Idijithi yokuqala imele ukumelana kwento ezintweni eziqinile, kuyilapho eyesibili imelela ukuvikelwa okunikezwa oketshezini.Uhlamvu X lusho ukuthi umkhiqizo awuzange uhlolelwe isigaba esifanele (okuqinile noma okuwuketshezi). Ukuvikelwa Kwento Eqinile Ukuvikelwa komkhiqizo we-elekthronikhi ezintweni eziqinile kusho ukufinyelela kwezingxenye eziyingozi ngaphakathi komkhiqizo.Izinga lisuka ku-0 liye ku-6, lapho u-0 esho ukuthi akukho nhlobo ukuvikeleka.Uma umkhiqizo unokuvikela okuqinile kwento engu-1 kuya ku-4, uvikelekile ezintweni ezingaphezu kuka-1mm, kusukela ezandleni naseminwe kuya kumathuluzi amancane noma izintambo.Ukuvikelwa okuncane okunconyiwe kuyindinganiso ye-IP3X.Ukuze uvikeleke ezinhlayiyeni zothuli, umkhiqizo kufanele ufake okungenani izinga le-IP5X.Ukungena kothuli kuyimbangela enkulu yomonakalo ngokuya ngezinto zikagesi, ngakho-ke uma umkhiqizo uhloselwe ukusetshenziswa ezindaweni ezinothuli, i-IP6X, ukuvikelwa okuphezulu okuqinisekisiwe, kufanele kube ukuhlanganisa. Lokhu kubizwa nangokuthi ukuvikelwa kokungena.Kubaluleke kakhulu ukukhetha Isilinganiso Se-IP esifaneleka kakhulu somkhiqizo we-elekthronikhi, njengoba lokhu kuba nomthelela ekutheni umkhiqizo umelane nokuxhumana nogesi oshajiwe, okungase kuholele ekulimaleni komkhiqizo ngesikhathi.Izingxenye ze-elekthronikhi ezimbozwe ngamafilimu amancane e-polymeric zimelana nezimo zemvelo ezinothuli isikhathi eside.
0- Akukho ukuvikeleka okuqinisekisiwe
1- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ezintweni eziqinile ezingaphezu kuka-50mm (isib. izandla).
2- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ezintweni eziqinile ezingaphezu kuka-12.5mm (isb iminwe).
3- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ezintweni eziqinile ezingaphezu kuka-2.5mm (isb izintambo).
4- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ezintweni eziqinile ezingaphezu kuka-1mm (isb. amathuluzi nezintambo ezincane).
5- Ivikelwe kuthuli oluningi olungaphazamisa ukusebenza okuvamile komkhiqizo kodwa lungaqini ngokuphelele uthuli.Ukuvikeleka okuphelele ezintweni eziqinile.
6- Uthuli luqinile futhi luvikela ngokuphelele ezintweni eziqinile.
I-Liquids Ingress Protection Okufanayo kuya koketshezi.I-Liquids Ingress Protection yaziwa nangokuthi ukuvikela umswakama futhi amanani angatholakala phakathi kuka-0 no-8. I-9K eyengeziwe isanda kwengezwa kukhodi yokuvikela ye-Ingress.Njengoba endabeni eshiwo ngenhla, u-0 usho ukuthi umkhiqizo awuvikelekile nganoma iyiphi indlela ekungeneni kwezinhlayiya eziwuketshezi ngaphakathi kwekesi.Imikhiqizo engangenwa amanzi ngeke imelane lapho ibekwe ngaphansi kwamanzi isikhathi eside.Ukuchayeka emanzini amancane kwanele ukulimaza umkhiqizo ngesilinganiso se-IP esiphansi. Kungenzeka ukuthi uhlangabezane nemikhiqizo enezilinganiso ezifana ne-IPX4, IPX5 noma i-IPX7.Njengoba kushiwo ngaphambili, idijithi yokuqala imele ukuvikelwa kwento eqinile kodwa ngokuvamile abakhiqizi abayihloli imikhiqizo yabo ukuthi ayinalo yini uthuli.Yingakho idijithi yokuqala imane ithathelwe indawo u-X. Kodwa lokho akusho ukuthi umkhiqizo awuvikelekile othulini.Uma inesivikelo esihle emanzini ngakho-ke kungenzeka ukuthi ivikeleke othulini futhi. Okokugcina, inani le-9K libhekisela emikhiqizweni engahlanzwa kusetshenziswa isitimu futhi isekele imiphumela yamajethi amanzi anomfutho ophezulu, kungakhathaliseki ukuthi isuka ngakuphi.Njengoba kushiwo ngaphambili, kumkhiqizo osohlwini lwe-IPXX, akukho kuhlola okwenziwe ukuze kutholwe ukuthi ingabe imikhiqizo imelana namanzi nothuli noma cha.Kubalulekile ukuqonda ukuthi ukulinganisa kwe-XX akusho ukuthi umkhiqizo awuvikelekile nhlobo.Ukuxhumana nomkhiqizi nokufunda njalo inkomba yomsebenzisi kuyisibopho ngaphambi kokubeka idivayisi ye-elekthronikhi ezimeni ezikhethekile.
0- Akukho ukuvikeleka okuqinisekisiwe.
1- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ngokumelene namaconsi amanzi aqondile.
2- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ngokumelene namaconsi amanzi aqondile lapho umkhiqizo utshekisiwe ufike ku-15° ukusuka endaweni yawo evamile.
3- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ngokumelene nezifutho eziqondile zamanzi kunoma iyiphi i-engeli kufika ku-60°.
4- Ukuvikelwa kuqinisekisiwe ngokumelene nokuchaphazeka kwamanzi kunoma iyiphi i-engeli.
5- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ngokumelene namajethi amanzi akhiqizwa ngombhobho (6.3mm) kunoma iyiphi i-engeli.
6- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ngokumelene namajethi amanzi anamandla akhiqizwa ngombhobho (12.5mm) kunoma iyiphi i-engeli.
7- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ekucwilisweni emanzini ekujuleni okuphakathi kuka-15 cm nemitha elingu-1 imizuzu engu-30 ephezulu.
8- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ezikhathini ezinde zokucwiliswa emanzini ekujuleni okungaphezu kwemitha elingu-1.
9K- Ukuvikelwa okuqinisekisiwe ngokumelene nemiphumela yamajethi amanzi anomfutho ophezulu kanye nokuhlanza umusi.
Izincazelo Zezinye Izilinganiso Ze-IP Ezivamile
IP44 —— Umkhiqizo onesilinganiso se-IP44 usho ukuthi uvikelekile ezintweni eziqinile ezinkulu kuno-1mm nokuchaphaza kwamanzi kuzo zonke izinhlangothi.
IP54 —-Umkhiqizo onesilinganiso se-IP54 uvikelekile ekungeneni kothuli ngokwanele ukuze uvimbele umkhiqizo ekusebenzeni ngendlela evamile kodwa awuqinile.Umkhiqizo uvikelekile ngokuphelele ezintweni eziqinile kanye nokuchaphazwa kwamanzi kunoma iyiphi i-engeli.
IP55 —— Umkhiqizo olinganiselwe we-IP55 uvikelekile ekungeneni kothuli olungase lube yingozi ekusebenzeni okuvamile komkhiqizo kodwa aluqinile uthuli ngokuphelele.Ivikelwe ezintweni eziqinile kanye namajethi amanzi akhiqizwa ngombhobho (6.3mm) ukusuka kunoma iyiphi indlela.
IP65—-Uma ubona i-IP65 ibhalwe emkhiqizweni, lokhu kusho ukuthi igcwele uthuli futhi ivikelekile ezintweni eziqinile.Futhi ivikelwe kumajethi amanzi aqanjwa ngombhobho (6.3mm) kunoma iyiphi i-engeli.
IP66—-Isilinganiso se-IP66 sisho ukuthi umkhiqizo uvikeleke ngokuphelele othulini nasezintweni eziqinile.Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo uvikelekile kumajethi wamanzi anamandla aqanjwa ngombhobho (12.5mm) ukusuka kunoma iyiphi indlela.
IPX4—-Umkhiqizo olinganiselwe we-IPX4 uvikelekile ekuchaphazeni kwamanzi kunoma iyiphi i-engeli.
IPX5—-Umkhiqizo onesilinganiso se-IPX5 uvikelekile kumajethi amanzi aqanjwa ngombhobho (6.3mm) ukusuka kunoma yiziphi izindlela.
IPX7—-Isilinganiso se-IPX7 sisho ukuthi umkhiqizo ungacwiliswa emanzini isikhathi esingaphezu kwemizuzu engama-30 ekujuleni okuphakathi kuka-15cm kuya ku-1m.
Isikhathi sokuthumela: Sep-10-2020